Khasaare Aan Laga Soo Laaban Karin: Liverpool Oo Laga Xayuubiyey Xaaladda Hidaha Adduunka UNESCO | Wararka Socdaalka Dhaqanka
Bogga ugu weyn » Wararka Socdaalka Dhaqanka » Khasaare aan la celin karin: Liverpool ayaa laga xayuubiyey UNESCO Xaaladda Hidaha Adduunka
Khasaare aan la celin karin: Liverpool ayaa laga xayuubiyey UNESCO Xaaladda Hidaha Adduunka
Liverpool waxay lumisay meeqaamkeedii hidaha adduunka "sababtoo ah lumitaanka aan laga laaban karin ee astaamaha gudbinaya qiimaha guud ee hantida."
UNESCO ayaa Liverpool ka xayuubisay meeqaamkeedii Dunida.
Webiga Liverpool hortiisa ayaa waxyeello ka soo gaadhay dib-u-habeyn lagu sameeyay meelaha hareeraha ka xiga biyaha ee magaalada.
Liverpool waxaa la siiyay maqaamkii ay jeclayd 2004 iyada oo loo aqoonsaday taariikhdeeda xarun ganacsi inta lagu gudajiray boqortooyadii Ingiriiska, iyo astaamihii dhismaha.
Kulankii maanta ee Guddigeeda Dhaxalka Adduunka, ayaa Ururka Qaramada Midoobay ee Waxbarshada, Sayniska iyo Dhaqanka (UNESCO) wuxuu ku soo gabagabeeyey in Liverpool dhinaceeda ay waxyeelo ka soo gaadhay by 5.5-billion ($ 7.48 billion) oo dib-u-habayn loogu samaynayo meelaha hareeraha ka ah magaalada ee hareeraha iyo dhismaha garoon £ 500-million ($ 680 million) ah oo laga dhisayo goobtii hore ee Bramley-Moore Dock.
Sidaa darteed, UNESCO waxay Liverpool ka xayuubisay meeqaamkeedii Hidaha Adduunka “iyadoo ay ugu wacan tahay luminta aan laga laaban karin ee astaamaha gudbinaya qiimaha guud ee hantida,” taasoo ay keentay dib-u-habeynta magaala-xeebeedka iyo dhismaha garoon kubbadda cagta ku teedsan.
UNESCO ayaa ku dhawaaqday go'aankeeda ah inay ka saarayso Liverpool warbixin ay soo dhigtay barteeda.
Liverpool ayaa ku tilmaamtay go'aanka looga saaray xaaladdeeda mid "aan la fahmi karin," waxayna ku doodeysaa in "Goobta Hidaha Adduunku weligeed xaaladdeeda ka wanaagsaneyn" sababo la xiriira boqolaal milyan oo maalgashi lagu sameeyay magaalada oo dhan.
In kasta oo ay Liverpool mudaharaad samaysay, UNESCO waxaay sheegaysaa inay Liverpool uga digtay 2012 inay xaaladdeeda qatar ugu jirto in meesha laga saaro haddii ay ku sii socoto horumarinnada dhinaca biyaha ee qorshaysan. Si kastaba ha noqotee, magaaladu waxay dooratay inay ku sii socoto mashaariicdeeda dhisme iyadoon loo eegin khatarta ay leedahay cinwaankeeda-World-Heritage-site.
Liverpool waxaa la siiyay maqaamkii ay jeclayd 2004 iyada oo loo aqoonsaday taariikhdeeda xarun ganacsi inta lagu gudajiray boqortooyadii Ingiriiska, iyo astaamihii dhismaha. Markii magaalada la gudoonsiinayey magaceeda, UNESCO waxay si gaar ah u tixraacday seeraleyda, oo door laxaad leh ka soo qaatay qarniyadii 18aad, 19aad iyo 20aad.
Go'aanka ah in laga saaro Liverpool ayaa ka dhigeysa magaaladii seddexaad ee lumisa maqaamkeeda, oo ay weheliso dooxada Elbe ee Dresden, ka dib markii la dhisay buundo afar haad ah oo ka socota guud ahaan muuqaalka, iyo Arabian Oryx Sanctuary oo ku taal Oman, ka dib markii ay hoos u dhigtay cabirkeeda aagga la ilaaliyo 90%.